Nkebi nke 1: Ò nwetụla mgbe ị chere ihu ọ bụla n'ikuku nsogbu mgbe eji gị iPhone?
Ọ nwere ike na-eme nwere nsogbu na mgbaàmà n'ikuku Mgbe ị jiri iPhone na-enweta ozi na ngosi dị ka "Ọ dịghị Service", "Ịchọ Service", "Ọ dịghị SIM", "Fanye SIM Kaadị". Ọzọkwa, e nwere ike ịbụ mbipụta na WiFi mgbaama ma ọ bụ eleghara internet netwọk ọbụna ị maara na ị na-enweta ha ka ha ngwaọrụ ndị ọzọ. N'ikuku mbipụta nwere ike mere site gị iPhone ngwaọrụ ma ọ bụ na-eweta ọrụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ohuru iPhone, ị kwesịrị ị na-aga ụlọ ahịa na ebe ị zụtara ya na-agbanwe ya. Ee, m maara na ọ bụ iru ala n'ihi na ị chọrọ na-enwe ozugbo site gị iPhone. Ma, ịtụkwasị m obi, ị zere abịa mbipụta. Ọzọ ikpe nwere ike ịbụ na i nwere ndiwụt n'ebe nile ọzọ, ma ọ bụghị gị n'ebe obibi gị. Na nke a ị kwesịrị ịkpọtụrụ eweta ọrụ gị. Ihe karịrị yiri, ke idaha e nwere ga-nsogbu site iPhone.
Ọ bụrụgodị na ọ na-atụ aro iji nweta nkwalite gị iPhone na ọhụrụ kwesịrị ekwesị iOS, pụrụ ibilite n'ikuku nsogbu. Tupu ime ihe ọ bụla mmegolite, mbụ ị ga-ndabere gị niile data gị iPhone. Dị nnọọ ka a ga-akwadebe ma ọ bụrụ na ọ bụla mbipụta ime.
Poolu pụrụ ibilite ma ọ bụrụ na iPhone na-gripped n'ụzọ na-ekpuchi abụọ nke metal gbalaga si ala n'akụkụ aka ekpe. Ọ na-adabere ebe poolu nọ ngwaọrụ. Otu echiche bụ ịzụta ihe mpụga ikpe iji zere nke a ụdị mbipụta. Na oge anyị, na e nwere ọtụtụ mma-na-achọ mpụga ikpe, otú ị-ahụ ihe dị egwu ikpe n'ihi na gị iPhone.
Nkebi nke 2: Idozi iPhone n'ikuku nsogbu site onwe gị
Ebe i nwere ike ịchọta ọtụtụ echiche dozie n'ikuku mbipụta site onwe gị, tupu na-aga na-eweta ọrụ gị.
1. Ị nwere ike tọgharịa netwọk ntọala si na gị iPhone, site na ịga na Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia na ịhọrọ Tọgharia Network Ntọala. A edinam nwere ike ime ka ndị kwesịrị ekwesị mgbanwe na ike dozie netwọk mbipụta.
2. Ekwu okwu banyere resetting naanị nke ụfọdụ atụmatụ, ị nwekwara ike tọgharịa niile data. Ị kwesịrị ị na chọọ ntọala gị na iPhone, ma họrọ General, mgbe ahụ, Tọgharia na ikpeazụ nzọụkwụ bụ ịhọrọ Tọgharia All Ntọala. Nke a edinam ga ghara ihichapụ gị data. Ma ọ bụrụ na ị na-eche ihe ọma, ị pụrụ ime a ndabere maka gị iPhone tupu na-aga site ntọala.
3. Weghachi gị iPhone dị ka a ọhụrụ iPhone ọ bụ ọzọ nhọrọ, ma i kwesịrị ịzọpụta gị niile data gị iPhone tupu anam a kpam kpam edinam. N'oge na iji iPhone, ị gbakọtara a otutu data. N'ezie, ị chọrọ ịnọgide na ndị a informations ọbụna ma ọ bụrụ mgbe ụfọdụ ndị nchọpụta nsogbu dị mkpa na ngwaọrụ gị ga na-weghachiri eweghachi.
4. Cheb'obi gị iPhone na mpụga ikpe, karịsịa ma ọ bụrụ na i nwere tupu nsogbu na n'ikuku nke mgbaàmà na n'ụzọ ụfọdụ ị edozi a nke. Iji zere ndị na-abịa nsogbu, metụtara n'ikuku mere site na poolu nke ngwaọrụ gị, na-gị iPhone na mpụga ikpe.
> Resource> iPhone> otú ndozi iPhone N'ikuku Nsogbu